Home Not-to-be-missed प्रिमियर लिगः म्यान्चेस्टर सिटीको जीत
Manchester City's Rodrigo controls the ball during the English Premier League soccer match between Manchester City and Brighton and Hove Albion at the Etihad Stadium in Manchester, England, Wednesday, Jan. 13, 2021. (Clive Brunskill /Pool via AP)
लन्डन । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएरातिको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भयो । उसले ब्राइटनलाई १–० ले पराजित गरेको छ । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई विजयी गराउन फिल फोडेनले ४४ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे ।
जितपछि अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको म्यानचेस्टर सिटीको १६ खेलबाट ३२ अंक भएको छ । सिटी सबै प्रतियोगितामा गरेर पछिल्ला १४ खेलमा अपराजित रहेको छ ।
प्रिमियर लिगकै अर्को खेलमा गएराति टोटनह्याम हट्सपर र फुल्हमले १–१ गोलको बराबरी खेलेका छन् । टोटनह्यामका ह्यारी केनले पहिलो गोल गरेको खेलमा फुल्हमका इभाँ क्याभेलेइरोले एक गोल फर्काएपछि दुबै टोलीले १–१ अंक बाँडेका हुन् ।
निर्धारित समयको खेल १–१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो । थप ३० मिनेटमा कुनैपनि टोलीले गोल गर्न नसकेपछि खेल टाइब्रेकरमा पुग्यो । टाइब्रेकरमा बार्सिलोनाका गोलरक्षक टेर स्टेगनले दुई वटा प्रहार बचाउँदै टोलीलाई फाइनलमा पु¥याए । बार्सिलोनाले अब फाइनलमा एथ्लेटिक बिल्बाओ र रियाल मड्रिडबीच हुने खेलको विजेतासँग खेल्नेछ ।
बार्सिलोना समग्रमा १४ औं पटक स्पेनिस सुपर कप उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ । साविक विजेता रियाल माड्रिडले ११ पटक स्पेनिस सुपर कप जितेको छ ।
राजधानी समाचारदाता - November 1, 2020
Exclusive एजेन्सी - February 26, 2020
Breaking News Roshan Shrestha - March 20, 2020
काठमाडौं । भारतको चर्चित बलात्कार काण्ड निर्भया बलात्कारका चारै जना दोषीलाई आज बिहान मृत्युदण्ड दिइएको छ । दिल्लीको तिहाड जेलमा बिहान साढे...
प्रदेश ४ विजय नेपाल - July 14, 2020
विप्लव समूहको नाममा ३ करोड रुपैयाँ चन्दा माग्ने चार जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेकपा माओवादी (विप्लव) समूहको नाम लिएर चन्दा माग्ने चार जना पक्राउ परेका छन् । विप्लव समूहको नाम लिएर एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी व्यवसायीसँग...
Breaking News महेश्वर गौतम - September 29, 2020